अस्पताल भित्र डाक्टरको लागु औषध व्यापार । सहारा दिने भन्दै यसरी बेचिदै बालवालीकाहरु ! भिडियो
टिम रविको सनसनीखेज खुलासा बिपी हस्पिटलमा डाक्टरहरुले नै ब्राउनसुगुरको कारोबारमा
मुलुकमा यत्रो चुनाव भयो । जनताले व्यालेट बक्समा आफ्नो मत दिए । मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै जनादेश स्पष्ट पनि भयो । तर अब सुनिदैछ पार्टी एकतासम्मको कुरा गरेका बामहरु प्रधानमन्त्री आलोपालो बन्ने मार्ग खोज्दै छन् रे ।मुलुकमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरह्यो र स्थायित्व चाहियो भनेर रट लगाउने पनि तपाईहरु । स्थायित्व मात्र होईन स्थीर सरकार भए विकाशको मुल प्याट्टै फुट्छ भन्ने पनि तपाईहरु, अनि जनादेश प्राप्त भैसकेपछि अब तपाईहरुको लडाई प्रधानमन्त्री पदका लागि ?
यो संयोग मात्र पनि हुन सक्ला तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फोन पालै पालै आउनु अनि केपी ओली ज्यु र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यु पालै पालो देशको प्रधानमन्त्री हुने कुरा बाहिर आउनुले स्थायित्वका लागि प्राप्त जनादेशको हुर्मत लिएको छ । त्यसमाथी पार्टी एकिकरण गरेर अघि बढ्ने वाचा, कवुल गरेका नेताहरुको यस्तो सर्त, भोली का लागि झगडाको विउ बन्ने कुराको संकेत प्रष्ट देखियो । ढुक्क हुन सक्ने प्रसस्त ठाँउहरु छन् ।
मुलुक र मुुलुकवासीका लागि अब केही गर्छौ भनेर मुखले भने पनि पद लोलुपता आलो पालो सिस्टमले प्रष्ट पा¥यो । ल ठिकै छ एक छिनलाई ओली ज्यु साढे २ बर्ष, प्रचण्ड ज्यु साँढे २ बर्ष प्रधानमन्त्री बन्नु भयो रे ।
बांकी मन्त्रीमंण्डल चाँहि उही कि अलग ? बाँकी मन्त्रीमण्डल नै नयाँ गठन गर्ने हो भने साढे २ बर्षको भिजन, बजेट, योजना कार्यान्वयनको के हविगत हुन्छ ? फेरी यति छोटो अवधीमा सपथ ग्रहण, आसन, भाषण र २÷४ थान रिवन काट्न बाहेक गर्न चाँहि के सकिन्छ ? जनमतको यस्तो बेहाल अशोभनीय छ । सबै मिलेको तर प्रधानमन्त्री बन्ने भाग बण्डा नमिलेको हो भने नयाँ बाटो समाउनुस् । केहि नभएका धेरै जात्राहरु देखिसकेका हामीलाई अर्को जात्रा हेर्न के को आइतबार भो र ।
जम्बो मन्त्रीमण्डल पनि देखिएकै हो, उपप्रधान मन्त्रीहरुको लावालष्कर पनि देखिएकै हो, खाली सम्बृद्धी मात्र नदेखीएको न हो । बाँकी नाटक सबै देखिएको हो । बरु संसारमा कँहि नभएको एउटा काम गरिदिनुस् २ वटा प्रधानमन्त्री एकै चोटी ।
एकै पटक दुई प्रधानमन्त्री भएको देश भनेर चिनुन् न । यो सुनेर संसारका अरु मानिस अचम्मित होलान हामी नेपालीहरु चाही अचम्मीत हुँदैनौँ । झट्ट सुन्दा नचाहिने कुरा लागेपनि फ्याट्ट न होला भन्न चाही सकिदैन है ।
रविको सिधा कुरा टिमले गरे यस्तो सनसनी खुलासा, खुलम खुल्ला बाल व्यापार, विपी कोइराला अस्पतालमा ब्राउन सुगरको कारोवार हेर्नुहोस भिडियो सहित ,यो राजधानी हो , जहाँ ठगहरु खुला सडकमा चिल्ला कारमा मग्न छन् , ठगिनेहरु जो सडकमा भौतारिरहेका छन् ,अस्पताल भित्र डाक्टरको लागु औषध व्यापार । सहारा दिने भन्दै यसरी बेचिदै बालवालीकाहरु !
१८ बर्षकि सेजलको कोठा भित्र पस्दा सबै ड*राए, यौ*नजन्य सामान देखि लागु औषध भेटिए, यसरी मा*रेको आ*रोप (भिडियो सहित)
मृ,तक सेजलको कोठामा पस्न नसकिने अवस्था, कोठा भित्र देखियो यौनजन्य सामाग्री,सिरिन्ज र बिभिन्न लागु औषध (भिडियो सहित)
कामी भन्दै बुहारी निकालेको घर पुग्दा नसोचेको भयो, म मर्छु तर बुहारीलाइ भित्र पस्न दिन्न भन्दै आमा आइन (भिडियो सहित)
इन्स्टामा सबैभन्दा धेरै फलोअर्स पाउने नेपाली सुन्दरी बनिन् असाध्यै हट अदिती….हेर्नुहाेस्(तस्बिरहरू)
माओवादीलाई भोट हालेको भन्दै छिमेकी कुट्ने दुई पक्राउ
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत गणनामा बालेनले कटाए ५० हजार मत